Isiraely: “fanavakavahana tsotsotra” amin’ny fitateram-baovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2009 7:43 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, polski, عربي, বাংলা, English
Eo ho eo amin'ny 20%-n'ny mponina, ireo Palestiniana mizaka ny zom-pirenena Isiraeliana (antsoina ihany koa hoe Arabo Isiraeliana) no milaza fa voavakavaka amin'ny sehatra maro eo amin'ny andaanandrom-piainana. Nanery am-panahy mpamaham-bolongana Palestiana iray any Isiraely ny fomba fitantaran'ny haino aman-jery lozam-piarakodia niseho vao haingana.
Ny mpamahana ny bolongana The Other Door [ny varavarana hafa] no mitantara ny momba ilay fampitam-baovao izay nanaovany lohateny hoe “Fanavakavahana tena tsotsotra”:
Ohatra, tao amin'ny vaovaon'ny Channel 10 Isiraeliana, dia naharitra 7:34 minitra ny nitaterana ity lozam-piarakodia ity, 1:08 minitra no lany tamin'ny filazalazana ilay mpanamory fiarakodia Jiosy syny fianakaviany, ary ny ambiny kosa niresahana momba ireo mpanao tantara tsangana sy ny namany. Fa ho an'ilay Arabo izay maty kosa dia nionona tamin'ny fanononana ny anarany sy ny filazana fa mpahay lalàna izy ary monina any Kiryat Shmona fotsiny ry zareo, dia namoaka ny sariny tao anatin'ny indray mi-pimaso fotsiny. Tsy kisendrasendra raha nanadino ny anarany avy hatrany aho vantany vao tapitra ilay fitateram-baovao…